Dowlada Soomaliya oo soo iibsatay qalabka lagu baaro Cudurka Halista ee Koonfeyska ah | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Dowlada Soomaliya oo soo iibsatay qalabka lagu baaro Cudurka Halista ee Koonfeyska...
Dowlada Soomaliya oo soo iibsatay qalabka lagu baaro Cudurka Halista ee Koonfeyska ah
Waxaa caawa magaalada Muqdisho soo cagadhigatay dayuurad ay leedahay Ethiopian Airlines oo siday shixnad gargaar ah oo ka kooban qalab loogu talo galay cudurka Coronavirus.
Qalabkan waxaa ku deeqay ganacsadaha caanka ah ee dalka shiinaha u dhashay Jack Ma oo ah Milkiilaha shirkadda Alibaba, Waxaana inuu dalka soo gaaro fududeysay Dawlada Shiinaha.
Waxaa ka mid ah qalabkan sheybaar casri ah oo loogu talo galay in lagu baaro cudurka Coronavirus, lebiska looga gaashaanto cudurka oo dhaqaatiirtu qaataan, maasgaraha wejiga lagu xirto iyo agab kale oo ay aad ugu baahneyd dowlada Somalia.
Agabkan ayaa waxaa danjiraha Shiinaha ka gudoomey Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Oomaar, waxaana goob joog ka ahaa Danjiraha Somalia u fadhiya dalka Itoobiya, Cabdixakiim Cabdullaahi Xaaji (Cameey) iyo xubno kale.
Qalabkan oo aad u fara badnaa ayaa waxaa shalay laga dejiyey magaalada Addis ababa, iyadoo dowlada Itoobiya loo wakiishay iney u qeybiso dalalka Afrika, Waxaana maanta la gaarsiiyey illaa lix dal oo ay ku jirto Soomaaliya.
HOOS KA DAAWO SAWIRADA IYO VIDEO-GA